Ukwazisa ngoAirbnb omtsha
UAirbnb omtsha, enye indlela yokuhamba
Abantu babhetyebhetye kakhulu kunangaphambili ngendawo nexesha abahamba ngalo. Ukuze sibancede bawasebenzise kakuhle la mathuba matsha, sazisa ngeyona nto inkulu etshintshayo kwiminyaka elishumi—kuquka indlela entsha kraca yokubuka, indlela ebhetele yokuhlala ixesha elide nezinga lokukhuselwa elingenakuthelekiswa nanto.
Indlela entsha yokubuka
Ukwazisa ngento entsha, eyakhiwe ngokusekelwe Kwiindidi ezikuAirbnb, ukunceda iindwendwe zimbuke lula uAirbnb—zize zifumane iindawo ebezingenokuzazi ukuba mazizikhangele.
Iindidi ezikuAirbnb. Yenzelwe ukunceda iindwendwe zifumane iindawo ezikhethekileyo.
Ababuki Zindwendwe bethu banezindlu ezikhethekileyo ezizimiliyoni emhlabeni wonke. Iindidi ezikuAirbnb ziyazidibanisa zibe zingqokelela ezidityanisiweyo, ezineendidi zezindlu ezingaphezu kwe-50 ezikhethwe ngenxa yendlela ezakhiwe ngayo, indawo ezikuyo okanye izinto onokuzenza ezikufuphi. Ziquka:
Iindawo eziyi-27 000
Iindawo eziyi-6 500
Iindawo eziyi-900 000
IiBed and breakfast
Iindawo eziyi-20 000
Iindawo eziyi-32 000
Iindawo eziyi-6 000
Iindawo eziyi-200 000
Iindawo eziyi-150 000
Iindawo eziyi-2 800
Iindawo eziyi-4 000
Iindawo eziyi-160 000
Iindawo eziyi-90 000
Iindawo eziyi-750 000
Iindawo eziyi-650 000
Iindawo eziyi-300 000
Iindawo eziyi-240 000
Iindawo eziyi-500 000
Iindawo eziyi-100 000
Buka Udidi Lwezakhiwe Ngobuchule
Ngoku iindwendwe zingazifumana lula iindawo ezingaphezu kwe-20 000 ezikhethwe ngenxa yokwakhiwa kwazo ngendlela ephawulekayo nokuhonjiswa kakuhle, kuquka ezimangalisayo ezenziwe ngabakhi abafana noFrank Lloyd Wright noLe Corbusier.
Umbuki zindwendwe nguMarika
Umbuki zindwendwe nguElodie
Umbuki zindwendwe nguLinda
Umbuki zindwendwe nguDayget
Umbuki zindwendwe nguSarah
Umbuki zindwendwe nguMiju
Umbuki zindwendwe nguRick noSteph
Umbuki zindwendwe nguHans
Indlela esenza ngayo Iindidi eziku-Airbnb
Zikhethwe kwiindawo ezizimiliyoni ezintandathu
Ababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb banezona zindlu zikhethekileyo ezininzi emhlabeni wonke—ukususela kwizindlu ezakhiwe emthini ukuya kwizindlu ezincinci—kwiidolophu ezingaphezu kwe-100 000 kumazwe ayi-220.
Zihlolwa yinkqubo yekhompyutha
Sihlola izindlu kuAirbnb sisebenzisa inkqubo eyenza ikhompyutha ikwazi ukuhlola izihloko, iingcaciso ezibhaliweyo, izimvo zeendwendwe, iingcaciso zeefoto nenye inkcazelo.
Amalungu eqela lokudibanisa izinto lakwa-Airbnb ahlola izindlu aze akhethe iifoto eziza kwenziwa zibe phambili. Udidi ngalunye luhlolwa okokugqibela ukuze kuqinisekiswe ukuba luchanile nomgangatho weefoto.
Ukwazisa Ngokuhlala Apha Naphaya
Abantu abaninzi bathatha uhambo olude kakhulu kunangaphambili. Ukuze babe nezinto ezingakumbi abanokukhetha kuzo xa beceba senze Ukuhlala Apha Naphaya, into entsha eyahlula uhambo ngokweendawo ezimbini ezahlukeneyo—ngoku iindwendwe zingafumana umyinge wezindlu eziyi-40% ngakumbi xa zikhangela iindawo zokuhlala ixesha elide.
Indlele ebhetele yokuhlala ixesha elide
Iindawo ezimbini kwindawo enye
Xa iindwendwe zikhangela indawo yokuhlala ixesha elide kwindawo enye, siza kuzinika ithuba lokwahlula uhambo lwazo ngokwezindlu ezimbini ezahlukeneyo kuloo ngingqi.
Iindawo ezimbini kudidi olunye
Ukuhlala Apha Naphaya kuyafumaneka nakwiindidi eziyi-14, kuquka Ukukhempisha, Iipaki Zelizwe, Eze-surfing, nezinye, ukuze iindwendwe zikwazi ukonwabela iindawo ezifanayo okanye izinto zokwenza zihleli kwiindawo ezimbini. Ngokomzekelo, undwendwe olubuka Udidi Lweepaki Zelizwe lunokufumana icebiso Lokuhlala Apha Naphaya lwendawo ekufuphi eZion nenye engakwiGrand Canyon.
Ixesha elimandi elinye
Sidibanisa ngobuchule iindawo ezimbini, ezidityaniswe ngokwendawo ezikuyo, uhlobo lwendlu nezinto ezinokusetyenziswa.
Ukuhlala Apha Naphaya kudityaniswa kwimephu ngumzobo owenza ucace umgama phakathi kwezi ndawo nokulandelelana kokuhlala kuzo.
Xa undwendwe lukhethe Ukuhlala Apha Naphaya, luyakhokelwa kwindlela yokuyenza elula yokubhukisha indlu nganye—ibe nye ngexesha.
Izinga lokhuseleko alikho elinje
IAirCover kokona kukhuselwa ngokupheleleyo kwasimahla kuhambo, ibe yenza iindwendwe zethu zithembe ukuba xa kukho into engahambi kakuhle, sikhona ukuze sizincede.
Eyona inshorensi yohambo equka yonke into. Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla. Kuphela kuAirbnb.
I-AirCover ikhusela undwendwe ngalunye kwizinto ezine qho luhleli
Kwimeko engafane yenzeke yokuba Umbuki Zindwendwe kufuneke arhoxise ukubhukisha kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, iindwendwe siza kuzikhangelela indawo efanayo okanye ebhetele, okanye sizibuyisele imali yazo.
Ukuba undwendwe alukwazi ukubhalisa xa lufika kwindawo yalo ibe Umbuki Zindwendwe akakwazi ukuyilungisa loo ngxaki, siza kulukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele yexesha elilingana nelo beluza kulihlala kwindawo yokuqala okanye silubuyisele imali yalo.
Igaranti Yento Oyibhukishileyo
Ukuba nanini na lusahleli undwendwe lufumanisa ukuba indlu ayifani nale ibiveziwe—umz., ifriji ayisebenzi ibe Umbuki Zindwendwe akakwazi kuyilungisa ngokukhawuleza okanye amagumbi okulala ambalwa—iindwendwe ziza kuba neentsuku ezintathu zokusixelela ibe siza kuzikhangelela indawo efanayo okanye ebhetele, okanye sizubuyisele imali yazo.
Inombolo Yoncedo Esebenza Oko
Ukuba nanini na undwendwe luziva lungakhuselekanga, luza kufumana uncedo olukhawulezileyo kubantu abaqeqeshwe ngokukhethekileyo, imini nobusuku.
Fumana iinkcukacha ezipheleleyo zendlela iAirCover ekhusela ngayo ukubhukisha kondwendwe ngalunye kunye nayo nayiphi na into engaqukwanga.
NguAirbnb kuphela onika undwendwe ngalunye iAirCover
Izinto enceda ngazo iAirCover xa ithelekiswa neeinshorensi eziquka yonke into ezifumaneka simahla zezona nkampani sikhuphisana nazo.
Iqela eliqeqeshwe ngokukhethekileyo, elilungele ukulungisa izinto
IAirCover yenziwe ngqo kwi-app ka-Airbnb nakwiwebhusayithi, ukuze kube lula ukuba iindwendwe ziqhakamshelane nomntu wokunceda nanini na zize zilungise iingxaki ngokukhawuleza. Ukuze senze iAirCover, senze iqela labantu bokunceda abaqeqeshwe ngokukhethekileyo ukuze bancede ngokubhukisha kwakhona ngomzuzu wokugqibela saza sandisa Inombolo yethu yoncedo esebenza oko ukuze ifumaneke ngeelwimi ezininzi ngakumbi kunangaphambili.